Fumanisa eyona venkile indala ye tattoo emhlabeni, ngaba unokuqikelela ukuba bekusebenza ixesha elingakanani? | Ukuzoba
Fumanisa ivenkile ye tattoo indala emhlabeni, ngaba unokuqikelela ukuba bekusebenza ixesha elingakanani?
Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni na yeyona venkile indala ye tattoo emhlabeni? Umntu unokucinga ngesikhundla sangaphambili kwi IPolynesia, mhlawumbi ngenkulungwane yeshumi elinesithoba, ithathwa isuka kutata isiya kunyana, enikezelwe kubugcisa obuhle be itattoo yemveli...
Kodwa ayifani. Impendulo iza kukothusa. Qhubeka ufunda ukuze wazi ngakumbi!
1 Izikhumbuzo zoqobo kunye nobomi bakho bonke
2 Iitattoos zamandulo nanamhlanje
3 Indawo encinci eCalle San Jorge
4 Umzali olusizi
5 Okokugqibela? Ndonwabile kusapho oluzinikele kubugcisa babo
Izikhumbuzo zoqobo kunye nobomi bakho bonke
Uninzi, iminyaka emininzi eyadlulayo, ngaphezulu kwe- amawaka asixhengxe, kwi IYerusalem bekungekabikho makhadi eposi kwaye abahambi ababezokwenza izinto zabo zokuhambela ezitalatweni ezishushu nezinothuli kwikomkhulu kwafuneka bathathe olunye uhlobo ndiyakhumbula ikasa.
Kutheni le nto abahambi ngezonqulo bekhethe ukuthatha le mvelaphi njengezikhumbuzo kulusu lwakho ayiqhelekanga kunokuba ivakala. Inkqubo ye- amakristu babeqhele ukuphatha I tattoo yomnqamlezo kunye negama likaKristu ukubachonga. Ngokufika kwe iindwendwe ukuya kwiLizwe eliNgcwele, oku kuye kwaqheleka ngakumbi kwaye abahambi baqala ukuziphawula ukukhumbula ukuhamba kwabo kulo mhlaba nakwabo ukuzinikela kwinkolo.
Iitattoos zamandulo nanamhlanje
IJerusalem, isixeko esineyona venkile indala ye tattoo emhlabeni.
Ngenxa yoko IYerusalem yokhenketho lwenkolo, eziqhelekileyo kumakhulu eminyaka, ezona zixhobo zidumileyo Khange batshintshe kakhulu ukusukela ngoko. Inkqubo ye- umnqamlezo waseYerusalem, imifanekiso umKristu o latin ucaphula zezinye zezona ziqwenga zifunwayo.
Nangona ngoku i herramientas ezisetyenzisiweyo zezi oomatshini be tattoo, kwinkqubo edlulileyo ibiyinto engaphezulu inzima. Ngokubhalwa kwexesha le nkqubo ichaziwe; endazi ngayo ukuvelisa kwakhona uyilo owayefuna ukwenza tattoo nge ukungunda ngomthi namalahle kwindawo oyifunayo. Emva koko yena Umzobi we tattoo, ngoncedo lwe inaliti esoloko sifakwa ngeinki, wachaza umzobo. Ekugqibeleni, isiqwenga saphela ngentsholongwane kuyo ngewayini.
Indawo encinci eCalle San Jorge
Ingaphakathi levenkile yakudala ye tattoo emhlabeni (Fuente).
Kwaye kulapho i Usapho lakwaRazzouk yiya kwisenzo. Kwizizukulwana ezine ezidlulileyo usapho lwahlala IYerusalem, nangona ebethatha umvambo ixesha elide: eyakhe Ookhokho bafunde ubugcisa bokwenza iitattoo Yiputa kwaye bahlala benxulumene necawa.
La familia Ugqibe kwelokuba uzinze kwi- encinci yendawo kwindledlana emxinwa nepholileyo, kufutshane neziko, kodwa kuthe cwaka, ngoku okuzidlayo kwezemidlalo a i kelesi bebonisa eyabo ngaphezulu kweminyaka engamakhulu asixhenxe yembali.
Ngelishwa, phakathi kwinkulungwane yamashumi amabini, ngexesha le imfazwe I-Arab-Israeli, i Usapho lakwaRazzouk kwafuneka abalekele Jordan kunye nobugcisa be Iitatto zabahambi Ukuphulukana nokuthandwa. Ekubuyeni kwayo, usapho lwakwazi ukuzondla Ivenkile ye tattoo ukuntywila kwizizukulwana ezizayo, kodwa kubonakala ngathi akukho namnye kubantwana bomnini oza kuyinyamekela shishini.
Kodwa ke omnye woonyana bosapho, UWassim, itshintshe yonke into. Lakhe Ukuthanda izithuthuthu kwamkhokelela ekubeni abe nomdla Iitato ngenxa ye isithethe sakudala Usapho lwakhe. Ngethamsanqa wagqiba thabatha ivenkile.
Okokugqibela? Ndonwabile kusapho oluzinikele kubugcisa babo
Ukusukela ngoko, i Utata kaWassim Wayethathe umhlala-phantsi kwaye unyana wakhe wayikhathalela ivenkile kunye nenkosikazi yakhe, naye oyithandayo Iitato. Aba babini bafunde iindlela ezintsha y baphucule ivenkile, Kunye ne- ziyilo kunye herramientas, ukuze i isithethe hlala uphilile namhlanje.
Lo familia Ke ngokukhethekileyo akaqinisekanga ukuba abantwana bakhe bafuna ukuqhubeka neshishini kwaye bathi abazukubanyanzela. Kodwa abaloyiki ikamva labo, kuba baqinisekile ukuba isithethe kunye ubugcisa Baya kubabiza, njengoko babebiza iWassim kudala.
Njengoko ubona, imbali ye Ivenkile endala ye tattoo emhlabeni Inomdla. Kwaye, ukhe watyelela I-inki yeRazzouk? Ngaba ubulindele ukuba ndibenokuninzi ibali? Yabelana ngeyakho uluvo kwizimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Amagcisa eTattoo » Fumanisa ivenkile ye tattoo indala emhlabeni, ngaba unokuqikelela ukuba bekusebenza ixesha elingakanani?
Iimpawu zochwethezo: ingqokelela yoyilo
Iitattoo zejekamanzi: ingqokelela kunye nentsingiselo